हो त ! केटी जिस्काउन मज्जा आउँछ - Ratopati
‘ओ ! स्विटि कता हो ?’
‘डेटिङ जान ला !, देखिनस ?’
‘मलाई नलगि एक्लै ! एक्लै !’
‘आईज न पछि लागेर, तेरो बाउले तह लाएर पठाँउदा था पाँउछस !’
खरो परिछे झनक्कै रिसाईहालि ।
बानी नै यस्तै छ । केटी देख्यो कि जिस्काईहाल्ने । साईडमा केटी देख्यो कि जोसले होस गुमाईदिन्छ । अनि पो सुरु हुन्छ लाईफ । कसैले सभ्य भनोस् कि असभ्य जंगली ! के को बाल ?
केटीहरु जब बाटोमा हिँडिरहेका हुन्छन्, घाँसको मुठो जस्तै सम्हालेर असरल्ल मन जति बाँध्न खोजेपनि समालिँदै, समालिँदैन् । खै के हुन्छ ?
फिल्म हेरेर, कथा, कविता लेखेर, गीत सुनेर त्यो आनन्द कहाँ प्राप्त गरिन्छ र ? जुन केटी जिस्काउदा आँउछ ।
‘ओई, आई हेर्न ! क्या च्वाँक छ यार ! साला, यसलाई पाए त…..तीन दिन तिमीहरुसँग नि बोल्दिनथेँ । ‘प्रकाशे बोल्यो । रोसने अलि कम खुल्याजस्तो गर्छ यस्तोमा । एक्लै चैँ फेरि भित्रैभित्र आगो सल्काउने खालको छ । जिस्काउनेदेखि फुस्काउनेसम्मको कहानी सुनाएरै र्याल चुहाउने बनाईदिन्छ, फुर्सदमा । न्युरोड गेटतिरबाट आरएनएसी हुँदै वीर अस्पताल, संकटा मन्दिर जाने केटीसम्मको वर्गिकरण गर्न पाईन्छ र त्यहि लेवलको जिस्क्याइ पनि । छिनदेखि जीन्दगी बिताउनेसम्मका क्याटागोरिमा छुट्याउन थालिहाल्ने केटाहरु ।
छोटो रातो स्कटमा खुल्न नि के बिघ्न खुलेकी हो । नजिकै आएपछि रोसने अगाडि सर्यो,
‘के छ डार्लिङ ?’
सालेले डार्लिङ पो दियो, मार्ने भई भनेको त,
‘ब्वाईफ्रेन्ड छ !’
तिमीहरुको गर्लफ्रेन्ड नभएरै त जिस्का होला नि ‘जान्छौ म सँग ?’
बाफरे ! एउटि केटी जिस्काँउदा, एउटीले तिनजना पो ताक्दी । कस्तो संकेत हो यो ? शुभ संकेत कि अशुभ ? ठहरै बनाइदिई । यति हुँदा नि प्रकाशेको आँखा उसको कम्मर मुन्तिरै अड्किरा रैछ, मुख मिठ्याँउदै, होस कता हो कता सोल्टीको ।
आजकालका केटी जिस्काउन नि कहाँ पहिला जस्तो सजिलो छ र ? पहिला पो ‘तिमीहरुका दिदिबहिनी छैनन् र घरामा गएर आफ्नै दिदीबहिनी जिस्का न भन्थे ।’
दिदीबहिनी त छन् आमालाई बुहारी चैँ भएनन रे ‘भन्दा हुन्थ्यो । अहिले त सिधै कुन्नि कुन चैँ शत्रु छ भन्छन् । ‘उ भएनी साईडमा हाम्लाई नि राखे भो नि !’ भन्नुपर्छ । नजिस्काँउ, भरे घरमा गएर ऐना हेर्दै म राम्री भैँनकि के हो ? कसैले जिस्काएनन् भनेर रोलान भन्ने पुरानो उखाने चलनको मान्यता राखेन भन्ने आरोप खेप्नुपर्ला भन्ने चिन्ता !
मनमनै केटीहरुलाई पनि मलाई कसैले जिस्काईदिओस भन्ने नलाग्ला र ? नत्र किन राम्री भएर ओठमा लिपिष्टिक, आखाँमा गाजल, छोटो मिनिस्कट लगाएर मगमगाएर, आकर्षक भएर हिँड्छन् त ? हो कि होईन भनेर टेष्ट गर्दा, प्रमाणित भा कै त हो ।
केटाहरु कालो चस्मा लाएर टिरिक्क परेर बस्ने, आज केटि नजिस्काउने भनेर बाल नदेको, एउटी हामी हुँदै गएकीले अलि पर पुगेर आफ्नो अगाडिपछाडि, तलमाथि मिलेकोनमिलेको हेरेर पटक–पटक हामीतिर फर्किँदै हेर्दै गई अति भएपछि, ‘दिदी तपाईंको पैसा खस्यो !’ भन्ने पुरानै फर्मुला लाईदेको । नजिस्काउ कस्ता नामर्द रैछ, भन्लान भन्ने चिन्ता ! जिस्काउ कोहि–कोहि त आँखाले नि बलात्कार गर्यो भनेर आरोप लाउलानजस्ता । कस्तो–कस्तो अप्ठ्यारो पनि सामना गर्नुपर्छ, सजिलो त कहाँ छ र ?
गाँउका बुढाहरु भेट्दा भन्छन्, ‘यहि हो बेला मोरा हो तरुनी जिस्काउने, फकाउने । बेला गएसी त उही पुर्पुराँ हात लाउनुसम्म हो, उमेरमा जानिएन भन्दै ।’
धर्मशास्त्रदेखिका कुरा जोड्छन । ‘स्त्रिको भर नभा नि कँहि मर्द हुन्छन ? ‘गाई नभाको गोठ, आइमाई बिनाको घर, फूलबेगरको फूलबारी, सबै बराबर । भनेर उल्क्याइदिँदा कम्ता हुँदैन । यस्ता बुढाहरु त मौका मिले शरीर बूढो भएनि मन बूढो भा छैन भन्दै गरेका भेटिन्छन् भने हामी त विपरीत लिङ्गी देखियो कि चुम्बकले तानिएजस्तो तानिने बेला । केटाकेटीले एकअर्कालाई जिस्काउन नि नपाए त कति निरास हुँदो हो है, जिन्दगी ?
आजकाल रातभर अनलाइनमा जिस्किन पाउने बेड सर्भिसहरु आ छन् । अस्ति एउटीले सोधि, ‘केटी जिस्काउन मज्जा लाग्छ हो ?’
‘हो त’ भनेँ ।
हामीले यो फोटो यस कथामा मिल्दोजुल्दो भएको कारण शुक्रबार साप्ताहिकबाट लिएका हौ ।
जवाफमा भनेँ, ‘स्वभाविक हो, विपरीत लिङ्गीको आकर्षण !’
‘के बाटोमा हिँड्ने सबै केटिप्रति आर्कषण हुन्छ ?’
कोहि केटी छोड्दिन्न ? ‘मिनीस्कर्ट लगाउनेदेखि साडी लगाउनेसम्मलाई जिस्काउन मन लाग्छ ?’
‘हुनत जिस्काउँदा कतिको भाग्य चम्केको होला ।’
धेरै प्रश्न सोधि उसले मानौँ उ मैले जिस्काएको केटि मध्येमा पर्छे र सोही विषयमा थेसिस गर्दैछ । मलाई नै उत्तरदाता बनाएर !
यसमा उसको चिन्ता थियो, समाजका पछिल्लो अस्थायी सम्बन्ध र महिला हिंसा सम्मको विषयमा । गहिरो गरि भनी ।
‘जिस्किने अनि जिस्काउने प्रवृति कति हदसम्म राम्रो हो ?’
भनि, ‘मलाई असभ्य लाग्छ ।’
मैँले यी विषयमा कहिले पनि त्यति गहिरिएर सोचेकै थिँइन ।
सरल जवाफ दिँए,
‘आजकल केटीहरु पनि जिस्काउन कम छैनन् । ग्रुपमा हिँड्दा कम केटा परे भने, दोहोलो काट्छन्, छोड्दैन ।’
त्यसको केही दिन चुप लागेर केटाहरुलाई तिमिहरुले केटि जिस्काउनुको मज्जा र कारणवारे भन भनेर भनेँ ?
केटाहरुले अनेक जवाफ दिए तर अन्तिममा भने ‘जे भएपनि केटी जिस्काउन मज्जा चैँ आँउछ नै ! कारण जे होस । अन्तमा उनलाई म्यासेज गरेर भने, ‘अब झनै मिनीस्कर्ट लगाउनेदेखि साडी लगाउनेसम्मलाई जिस्काउन आँट आयो । जिस्काउँदा भाग्य चम्किन के बेर !’
उ हाँसी मात्र हिहि गरेर…..!
(यो गतहप्ताको सविता सापकोटाको ‘केटी जिस्काउन मज्जा आँउछ हो ?’ को प्रति उत्तर हो ।)